Guriyeynta caawinta iyo adeegga - InfoFinland
Nolosha Finland > Deganaanshaha > Guriyeynta caawinta iyo adeegga
Dalka Finland waxay dadka u baahan yihiin in la siiyo guriyeynta taageersan (tukiasuminen) iyo guriyeynta adeeg leh (palveluasuminen), haddii ay u bahan yihiin in laga taageero xagga degenaanshada xorta ah. Guriyeynta adeeg leh iyo kuwa taageersan waxaa heli kara:
dadka waayeelka ah,
dadka wax u dhiman
dadka kasoo bogsoonaya cudurada dhimirka iyo dhibaatoyinka maandooriyaha.
Guriyeynta adeeg leh iyo kuwa taageersan waxaa bixiya degmooyinka, ururada iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay.
Guriyeynta adeeg leh iyo kuwa taageersan helitaankeeda waxaa laga codsadaa xafiiska arimaha bulshada (sosiaalivirasto) ee degmadaada.
Qof ku nool guriyeyn taageersan wuxuu hawlihiisa inta badan u qabsadaa si xor ah. Cawinaada ama taageerida la siinayo wuxuu ku xiran yahay baahida taageerid uu deganaha leeyahay. Waxay noqon kartaa u tegid maalin walba ah ama u tagid usbuuc walba ah. Guriyeynta taageersan wuxuu ahaan karaa karaa guri uu qof si gaar ah u leeyahay, guri ijaar ah, ama guri nooc kale ah.
Dhererka guriyeynta taageersan wuxuu ku xiran yahay hadba xaalada nololeed ee qofka iyo baahida uu u qabo adeegga. Ujeedada laga leeyahay guriyeynta taageersan waa in dadku xaalada noloshooda si wanaagsan u maareeyaan, si ay ugu suurtogasho inay awoodaan inay u wareegaan degaan ay si xor ah kaligood ugu noolaan karaan.
Guriyeynta adeeg leh
Guriyeynta adeeg leh waa nooc ka mid ah guriyeynta, kaas oo loogu talogalay dadka sida joogtada ah cawinaad u baahan, laakiin aan u baahnayn daryeelka xarumaha dadka lagu hayo.
Guriyeynta adeeg leh wuxuu ka kooban yahay guri iyo adeegyada la xiriira deganaanshada. Qofku asaga ayaa mas’uul ka ah kharashaadka guriga. Guriyeynta adeeg leh waxaa lagu bixin karaa guryaha caadiga ah, xarumaha dadka ay ku jiraan oo loogu adeego, guryaha adeega wadareed ama nooc kale. Taas macnaheedu waa in dadku leeyihiin guryo u gaar ah, kuwaas daganaanshahooda adeeg ku helayo.
Adeegyadu waxay noqon karaan tusaale ahaan cawinaada daryeelka guriga, adeeg cunto, adeegyo ah xagga fayadhowrka shakhsiyadeed, adeegyo kala duwan oo xagga nabadgalyada iyo daryeelka caafimaadka ah.
Kharashaadka adeegga deganaanshada
Kharashka adeegga deganaanshadu wuxuu ku xiran yahay cidda bixinaysa adeegga. Adeegga guriyeynta waxa bixiya degmooyinka iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay. Qiimaha iyo adeegyadu aad ayey u kala duwan yihiin.
Markii aad dalbanaysid guriyeynta deganaanshada, waxaa haboon inaad si taxadar leh u ogaatid, inta uu yahay qiimaha adeegu. Waxaa kula gubnoon inaad is bar-bar-dhigto qiimeyaasha xarumaha adeegga degmada iyo kuwa shirkada gaarka loo leeyahay ay leeyihiin. Qofka adeega isticmaalaya ayaa iska bixinaya kharashaadka degaanka iyo adeegaba, haddii uu awoodo. Si kastaba ha ahaate degmadu waa inay hubiso, in qofku uu leeyahay hanti uu ku daganaan karo guriga adeega, haddii uu u baahan yahay adeegga deganaanshada. Si aad u ogaato dariiqooyinka degaanka mida kugu habboon, waxaad cawinaad ka heli kartaa xafiiska arrimaha bulshada ee degmada.
Dadka waayeelka ah oo u baahan cawinaada iyo taageerada dibada oo maalinlaha ah, waxay xaq u leeyihiin adeega deganaashada. Adiga ayaa kala dooran kara, inta uu la'eg yahay adeega deganaansho ee lagu siinayo.
Adeega degaanka waxaa loo abaabulaa dadka curyaamiinta ah, kuwaas oo cawinaad u baahan dhaawacdooda ama jiradooda awgeed si ay u maareeyaan hawlaha nolol maalmeedkooda.
Bogga InfoFinlandi Adeegga dadka laxaadka la’ waxaad ka heleysaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan adeegyada loogu talagalay dadka naafadda ah.
Dadka kasoo bogsoonaya cudurada dhimirka iyo dhibaatoyinka maandooriyaha
Dadka kasoo bogsoonaya isticmaalka maandooriyeyaasha ama dhibaatoyinka caafimaadka dhimirka waxaa suurto gal u ah inay helaan guriyeynta taageersan. Ayadoo la isticmaalayo cawinaada degaanka waxaa la baranaaaa xor u degenaanshada iyo noloshada, waxaana la helayaa taageero si looga soo bogsado dhibaatoyinkii hore.
Bogga InfoFinlandi Dhibaatooyinka mukhaadaraadka waxaad ka heleysaa macluumaadka meesha aad ka heleyso caawimaad haddii adiga ama ehelkaada ay dhibaato dhinaca maandooriyaha ah qabaan.
Macluumaad la xiriira guryaha taageerada iyo adeega lehFinnish | Iswidish | Ingiriis
Adeegga deegaankaFinnish | Iswidish